कुरा याैनकाे – onlinedarpan:
अचम्म : यसरी श्रीमती साटासाट गरेर यौन स्वाद लिएको पर्दाफास भएपछि…
अहिलेको युगमा विश्वमा अनौठा अनौठा घटना सुन्न पाइन्छ । जसलाई कलियुग भन्ने गरिन्छ ।हाम्रो समाजले सोच्नै नसक्नेगरी यहाँका दम्पत्तिले श्रीमती साटेर यौनसम्पर्क गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । आफ्नी श्रीमतीलाई परपुरुषसँग र परपुरुषकी श्रीमती वा गर्लफेण्डसँग आफूले यौनसम्पर्क राख्ने गरेको घटना समाचारमार्फत बाहिर आएको हो । घटना छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको हो विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on December 29, 2018 December 29, 2018 Author onlinedarpan	Comment(0)
योनि चिलाउने : यो महिलाहरुमा हुने सामान्य समस्या हो । भन्नपनि लाज लाग्ने, नभन्दा समस्या विकराल बन्दै जाने । यो समस्यामा सेतो पानी बग्ने तथा योनिका भित्ताहरुमा चिलाउने हुन्छ । चूर्णा परे पनि गुह्द्धारबाट सर्दैसर्दै वर आइपुग्छन् र योनि चिलाउने हुन्छ । हर्षा भएमा, न्यूरोसिस र महिनावारी हुनुभन्दा पहिले पनि यौनी चिलाउने गर्छ । गर्भवती विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
महिलाका लागि अस्थायी गर्भनिरोधका अनेक विधि छन् । सुर्इ देखि लिएर, पिल्स अनि पाठेघर तथा पाखुरामा राख्नेसम्मका उपकरण र कण्डम पनि । तर पुरुषका लागि भने अस्थायी गर्भर्निरोधक साधनको रुपमा कण्डमको विकल्प अहिलेसम्म छैन । यस्तोमा पुरुषहरु आफुहरुको लागि पनि कण्डमको विकल्पका रुपमा नयाँ गर्भनिरोधक साधनको व्यग्र प्रतिक्षामा हुनु स्वभाविकै होपुरुषहरुको यहीँ प्रतिक्षाको घडी समाप्त विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ? अनि सेक्समा के कुराले मूड विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
उत्तेजना र सेक्सको गहिरो सम्बन्ध छ । पुरुष वा महिला सेक्सको समयमा जति धेरै उत्तेजित हुन्छन् त्यती नै सेक्स गर्नमा मज्जा आउँछ । तर कहिले काँही पुरुषहरु उत्तेजित हुन सक्दैनन् र शीघ्रस्खलन भएर पुनः सेक्स गर्ने स्थितिमा हुँदैनन् । पुरुषलाई उत्तेजित पार्ने धेरै तरिकाहरु छन् तर केही सामान्य तरिकाहरु यहाँ रहेका छन् । तपाई यी विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…